काठमाडौँः जावलाखेलस्थित सदर चिडियाखानामा मंगलबार दिउँसो एउटा बाघ ल्याइयो । बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जबाट लठ्ठ्याएर गाडीमा ल्याइएको बाघ चिडियाखाना घुम्न आउने मानिसलाई देखाउन ल्याइएको होइन ।
बर्दियामा लगालग मान्छे मार्न थालेपछि उसलाई झ्यालखानामा हालिएको हो ।
आइतबार साँझ मात्रै यो बाघले गैंडा गणना गर्न हात्तीमा गएका बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका कर्मचारी पुलिसराम थारूलाई आक्रमण गरी मारेको थियो ।
पुलिसरामजस्तै गत साउनयता बाघको आक्रमणमा परी ११ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। तीमध्ये १० जना बर्दियाका छन् भने एक जना कैलालीका ।
११ जनामध्ये तीनको ज्यान त चिडियाखानामा ल्याइएको यही बाघले लिएको निकुञ्जका कर्मचारी बताउँछन् ।
’हामीले राखेको क्यामेरामा तीन जना मानिसलाई यही बाघले आक्रमण गरेको देखिन्छ,’ राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका बर्दिया प्रमुख रविन कडरियाले भने, ‘फरक–फरक घटनामा एउटै बाघले आक्रमण गरेको देखिएपछि उसलाई पक्रेर काठमाडौं पठाएका हौं ।’
अचेल बाघले किन धमाधम मान्छे मारिरहेका छन् त ?
कतिपयको भनाइ छ– सरकारले संरक्षण गरीगरी बाघ पाल्यो, अहिले तिनै बाघले मान्छे मार्न थाले ।
प्रकृति संरक्षण कोषका सदस्य–सचिव शरद अधिकारीका अनुसार सरकारको संरक्षण अभियानका कारण पछिल्ला १० वर्षमै नेपालमा १ सय ३५ वटा बाघ थपिएका छन् । सरकार यो संख्या अझै बढाउन लागिपरेको छ ।
बाघको संख्या बढाउने लक्ष्य सन् २०१० मै तय भएको हो ।
सन् २०१० मा काठमाडौंमा ग्लोबल टाइगर्स वर्कसप भएको थियो। त्यही वर्ष रूसको पिटसबर्गमा विश्व बाघ सम्मेलन भयो । उक्त सम्मेलनमा बाघ पाइने १३ मुलुकका प्रतिनिधि सहभागी थिए । नेपालबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नै गएका थिए ।
उक्त सम्मेलनमा नेपालले सन् २०२२ सम्म आफ्नो देशमा बाघको संख्या दोब्बर पार्ने प्रतिबद्धता व्यक्त ग¥यो । त्यति बेला नेपालमा १२१ वटा बाघ थिए। सन् २०२२ सम्म त्यो संख्या २५० पु¥याउने नेपालको लक्ष्य छ ।
बाघको संख्या दोब्बर पार्न उनीहरूलाई चाहिने बासस्थान र आहार पाइने क्षेत्र पनि बढाउनुपर्थ्यो । सरकारले त्यसका लागि बाँकेमा नयाँ राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थापना ग¥यो। पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्रफल थप्यो ।
’बासस्थान र आहार भएर मात्र पुग्दैनथ्यो, बाघको अवैध शिकार र चोरी निकासी पनि रोक्नुपर्थ्यो । सरकारले त्यसका लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागअन्तर्गत वाइल्ड लाइफ क्राइम कन्ट्रोल ब्युरो बनायो,’ सदस्य–सचिव अधिकारीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा बाघ संरक्षण समिति बन्यो। एकातिर बासस्थान र आहार थपियो, अर्कातिर चोरी शिकारी नियन्त्रण भएकाले नेपालले बाघको संख्या दोब्बर पार्ने लक्ष्य भेट्टाउन लागेको छ ।’
सन् २०१८ को गणनाअनुसार नेपालमा पर्सा, चितवन, बाँके, बर्दिया र शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा गरी बाघको संख्या २ सय ३५ थियो। पछिल्ला तीन वर्षमा यो संख्या अझै बढेको हुनसक्छ ।
त्यसो भए संख्या बढेकै कारण बाघले मान्छे मार्न थालेका हुन् ?
यो प्रश्न हामीले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष सदर चिडियाखाना जावलाखेलका प्रमुख चिरञ्जीवी पोखरेललाई सोध्यौं । पोखरेलले इटालीको युनभिर्सिटी अफ फेराराबाट बाघसम्बन्धी विषयमा विद्यावारिधि गरेका छन् ।
उनले पछिल्लो समय बाघ र मानिसबीच द्वन्द्व बढ्नुमा बाघको आपसी सम्बन्ध र मानिससँगको सम्बन्ध कारण हुन सक्ने बताए ।
पोखरेलका अनुसार नेपालमा पाइने बाघको नाम रोयल बंगाल टाइगर हो । बोलीचालीको भाषामा यसलाई पाटेबाघ भनिन्छ। यो जंगलको मुख्य शिकारी हो । यसको आयु औसतमा १५ वर्ष हुन्छ ।
विशेष गरी तराईमा पाइने यो बाघ पछिल्लो समय डडेल्धुरा र इलामजस्ता पहाडी भेगमा पनि भेटिएको छ ।
’हेर्दा निकै डरलाग्दो देखिने भए पनि यो बाघ निकै लजालु स्वभावको हुन्छ । मानिसहरूसँग सकभर सम्पर्कमा आउन नचाहने, टाढैबाट देखादेख भइहाले पनि लुक्ने उसको प्राकृतिक स्वभाव हो,’ पोखरेलले भने, ‘अहिले ऊ आफ्नो स्वभावविपरीत मान्छेमाथि जाइलागिरहेको छ ।’
बाघले यसरी मान्छेलाई आक्रमण गर्नुमा चारवटा कारण हुन सक्ने पोखरेल बताउँछन् ।
सबैलाई थाहा छ, बाघ जंगलमा आफ्नो क्षेत्र बनाएर बस्छ ।
पोखरेलका अनुसार एउटा पोथी बाघले २५–३० किलोमिटरमा आफ्नो क्षेत्र बनाउँछ भने भाले बाघको क्षेत्र ४० देखि १०० किलोमिटरसम्म हुन सक्छ । क्षेत्र बनाउनमा पोथीभन्दा भाले बाघ निकै संवेदनशील हुन्छन् ।
भाले बाघले आफ्नो क्षेत्रमा चार–पाँचवटा पोथीलाई पनि राख्न सक्छ तर अर्को भाले बाघ आएको सहनै सक्दैन । दिसा–पिसाब, गन्ध लगायत अन्य विभिन्न संकेतहरूबाट बाघले आफ्नो क्षेत्र बनाएका हुन्छन् र अरू आएको पनि त्यस्तै माध्यमबाट थाहा पाउँछन् ।
९६८ किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा अहिले ८७ वटा बाघ छन् ।
’कतिपय ठाउँमा क्षेत्र ओभरल्यापिङ भएको पनि हुन सक्छ तर उनीहरू आफ्नो मुख्य क्षेत्रमा अरूलाई छिर्न दिँदैनन्,’ पोखरेलले भने, ‘नयाँ बाघलाई पुरानाले ठाउँ नदिएको वा धेरै बूढो भएपछि तन्नेरीले लखेटेको पनि हुन सक्छ । यस्तो बेला कमजोर बाघले घना जंगलभन्दा टाढा आहारा नपाउने क्षेत्रमा जानुपर्ने हुन्छ ।’
यस्ता बाघ बस्तीनजिक आइपुग्ने र मानिसलाई देखे आक्रमण गर्न सक्छन् । यो वर्ष मान्छे मारेको अभियोगमा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जले समातेका चारवटै बाघ भाले हुन् ।
बाघले मान्छेलाई आक्रमण गर्नुको कारण आहारा पनि हुन सक्ने पोखरेलले बताए ।
एउटा वयस्क बाघले एकपटकमा ४० किलोसम्म मासु खान सक्छ । खान नसकेको मासु उसले लुकाएर पछिका लागि साँचेर राख्छ ।
त्यति मासुको जोहो गर्न उसलाई सजिलो भने हुँदैन ।
पाटेबाघको मनपर्ने आहारा मृग, जरायो, बँदेल, निलगाई, गौरीगाईजस्ता जनावर हुन्। नेपालमा बाघको संख्या बढेसँगै उसका आहाराको संख्या पनि बढेको पोखरेल बताउँछन् ।
यी जनावरको शिकार गर्न भने बाघले निकै समय र शक्ति खर्च गर्नुपर्छ । पोखरेलका अनुसार बाघले शिकारका लागि गरेका प्रयास १०–१५ प्रतिशत मात्रै सफल हुन्छन् ।
’एकचोटि मान्छेलाई आक्रमण गरेको बाघले सजिलो शिकार ठानेर फेरि पनि आक्रमण गरेको हुन सक्छ,’ पोखरेलले भने ।
बाघले आक्रमण गर्नुको अर्को कारण दुर्घटना पनि हुन सक्ने उनले बताए ।
अर्को भाले बाघसँग झगडा परेको वा पोथी बाघसँग संसर्ग भइरहेका बेला मान्छे नजिक परे बाघले आक्रमण गर्न सक्छ ।
’पोथी बाघले नजिकै आएको मान्छेबाट आफ्ना बच्चा असुरक्षित छन् भन्ने ठानेर पनि आक्रमण गर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘यस्ता घटना अचानक हुने गर्छन् ।’
बाघ–मान्छे द्वन्द्व बढ्नुको अर्को कारण बाघको बासस्थानमै मानिस जानु हो ।
यसपालि बाघको आक्रमणबाट ज्यान गुमाएकाहरूमध्ये पाँच जना बर्दियाको खाता जैविक मार्गनजिकैको बस्तीका बासिन्दा हुन् ।
यो ठाउँ बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र भारतको कतर्निया घाट वन्यजन्तु संरक्षण क्षेत्र बीचमा पर्छ । मानिसहरू नजिकैको जंगलमा घाँस काट्न, च्याउ टिप्न, भैंसी चराउन गएका बेला पनि बाघको आक्रमणमा परेका छन् ।
बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको बीच भएर पूर्व–पश्चिम राजमार्ग जान्छ । कैलालीकी एक जना महिलालाई बाघले बाटोमै आक्रमण गरेको थियो ।
’बाघको संख्या बढेसँगै मानिसहरूमा त्यही किसिमको संवेदनशीलता नबढेकाले पनि घटनाहरू भएका छन्,’ पोखरेलले भने ।
बाघ–मान्छेबीचको यो द्वन्द्व घटाउने कसरी त ?
राष्ट्रिय निकुञ्जहरूले अहिले ठाउँ–ठाउँमा क्यामराहरू राखेर बाघको आवतजावत ट्रयाक गरिरहेका छन् ।
’बाघ देखिएको ठाउँमा यहाँ नजानुहोला भनेर सूचना पनि टाँसेका हुन्छौं,’ कोषका बर्दिया प्रमुख कडरियाले भने ।
निकुञ्जले नजानू भने पनि कतिपय मानिस जुन जंगलमा बाघ बस्छ त्यसैमा आश्रित हुन्छन् । उनीहरूले जंगलबाट घाँस दाउरा नगरे बस्तुभाउले खान पाउँदैनन्, चुल्होमा आगो बल्दैन ।
’खाता जैविक मार्गछेउको बस्तीमा रहेका मान्छे बाघकै बासस्थानमा आश्रित छन्, यसले बाघ–मानव द्वन्द्व बढाएको छ,’ कोषका सदस्य–सचिव अधिकारी भन्छन्, ‘अब त्यो बस्ती नै सार्ने कि के गर्ने भन्नेबारे सम्बन्धित निकायले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।’
जंगली जनावर र मान्छेको द्वन्द्व कम गर्न गर्नुपर्ने अर्को पनि काम छ । हाम्रा पूर्वाधारहरू बनाउँदा जनावरको प्राकृतिक रूपमा हुने आवतजावतमा असर नपर्ने गरी बनाउनुपर्छ ।
’विदेशतिर जंगल क्षेत्रमा सडक बनाउनुप¥यो भने जनावरहरू ओहोरदोहोर हुने गरी करिडोर पनि बनाइन्छ,’ चिडियाखाना प्रमुख पोखरेलले भने, ‘अब हाम्रोमा पनि त्यस्तो गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।’ -सेतोपाटीबाट